Shirkii SNM ay yeelato kii ugu adkaa ee Muse Bixi shir-guddoominayey laguna doortay AUN Abdirahman Ahmed Ali. ( Halkan ka daawo ) | Awdalpress.com
Waxa Daabacay staff-reporter on Sep 30th, 2017 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Mudane Biixi waa musharraxa Madaxweyne ee xilligane, waa waaya arag colaad iyo nabadba u soo joogay, oo maanta cimrina tirsaday. Waxana uu maanta doonayaa in uu hoggaanka u qabto dalka Somaliland, oo uu ku leeyahay taariikh togan iyo mid taban labadaba. Waana nin xilkaa hoggaanka dalka qaban kara, weliba ka tegi kara taariikh lagu xasuusto. Ka shakhsi ahaanna waan soo dhaweynayaa haddii uu doorashada ku guulaysto.
Ninka ragga ah amma haweeyneyda geesiyadda ah ee ka soo qayb qaadatay/ta halgan ummadeed amma qabiil, oo natiijadiisu noqdo guul, waa caadi in kolba inta nool ee ka soo qayb qaadatay ay ku faanto. Somaliduna waxa ay tidhaa FAANKU WAA XOOLO AAN LAGULA LAHAYN.
Inkasta oo hadda ay muddo nus qarci ku dhawi ay ka soo wareegtay xilligii SNM ay dagaalka ku soo qaadday gobolladii la isku odhan jiray woqooyiga Somalia. Ayaa ahaa mid lagu kala fikir iyo aragti duwanaa qaabkii iyo hawl galkii xarakadaasi SNM.
Wakhtiga xarakadan iyo kuwo kaleba ay ka gil-gisheen cadaadiskii uu ku hayey xukunkii Siyaad Barre, ayaa ahaa mid aan cadaadiskaasi iyo dibin daabyadaasi ku koobnayd uun beelo gaar amma qabiilooyin gaar ah. Balse ahaa mid dalkii la isku odhan jiray Somalia oo dhan saameeyey.
Laakiin dhalashadii xarakooyinkii SSDF, SNM, USC, SDA iyo kuwo kaleba ay u ujeedkii dagaalka u yeeleen waji qabiil. Waxana ugu hadal hayn badnaa ururkii SNM. Oo runtii ahaa mid raad adag kaga tegey gobollada galbeedka iyo bariga Somaliland. Halka ay gobollada dhexe ee Somalilandna billado ugu toleen. Hase yeeshee, SNM markii ay dalka soo gashay ay tallaabo u qaadeen dhinaca nabadaynta gobolladii la isku odhan jiray woqooyiga Somalia.
Muse Bixi Abdi oo ah musharraxa madaxweyne ee xisbiga KULMIE, ayaa ka mid ahaa haldoorka ka hadhay rag iyo dumar badan oo aan maanta noolayn. Waxana aan dib u milicsaday muuqaallo iyo waraysiyo badan oo la xidhiidha kaalintii uu Muse ku lahaa xarakadaa SNM iyo dhismihii Somaliland. Oo ay ka mid tahay shirkii ugu adkaa ee SNM yeelato xilligii ay duurka ku jireen oo uu shir guddoomiye ka ahaa. Isaga oo aan dabadii la hadlayn.
Film-madaasi oo aan idiin soo gudbin doonno, waxa ka muuqdo taariikh aan la dafiri karin oo uu ku faani karo Muse Bixi, laakiin dad badan oo aan ka mid ahay aannaan u arkayn taariikh lagu faano, maaddaama aan markhaati ka nahay dhib iyo bur bur ay SNM soo gaadhsiisay dadkii ay lahaayeen ama dhulkii dhisnaa ee ay bur buriyeen. Iyaga oo sheeganayey in ay kala dagaallamayaan cadawga.
Waraysi kale oo uu Abdillaahi Cukuse ka qaaday ayaa iyaduna ah mid xasuus mudan.
Runtii Muse Bixi waxa uu ahaa geesi ay tolkii ka giigeen……. Waa sida aan ka dhageysan doontaan hadalka Abdiraham Ahmed Ali….. Waxanu xubin fir fircoon ka ahaa xarakadaasi SNM, oo uu mar walba hoggaankeeda sare xubin ka ahaa.
This post has been viewed 14041 times.